မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဆူရှီဆိုင်ဖွင့်ထားရတဲ့ အကြောင်းအရင်း - JAPO Japanese News
သော 09 Aug 2019, 11:15 မနက်
တိုကျိုမြို့ရဲ့ Asakusa မှာရှိတဲ့ဈေးလမ်းကြားလေးရဲ့ တစ်နေရာမှာ 「寿司令和」Sushii Reiwa ဆိုတဲ့ ဆူရှီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်။
တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ 「いらっしゃい！」ဆိုတဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုနေတဲ့ အသံကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆိုင်လေးက ဆူရှီဆိုင်ဆိုပေမယ့် ဆူရှီနဲ့ sashimi စတာတွေအပြင် အကြော်အလှော်မီနူးတွေလည်း အများအပြားရှိပါတယ်။
ဆူရှီမှာမယ်ဆိုရင် အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းကန်လေးနဲ့ သန့်ရှင်းလတ်ဆက်တဲ့ ဆူရှီတွေကို ယူဆောင်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အရသာကလည်း အကောင်းဆုံးပါပဲ …
အဲ့ဒီဆူရှီတွေကို ဘယ်သူတွေလုပ်နေပါလိမ့် ? လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ …
ဆူရှီလုပ်နေတဲ့သူကတော့ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါတယ်။ တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ရှင်က မောင်လှရွေ တို့ မြန်မာလူမျိုးအဖွဲ့ကနေ စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ ဆူရှီဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးလှရွှေ ဆိုသူက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ မြန်မာလူမျိုးစားဖိုးမှူးကြီးတွေက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နှစ်ရှည်လများစွာ တခြားဂျပန်စားဖိုးမှူးတွေနဲ့ ထပ်တူကျအောင် ဆူရှီစားဖိုမှူးအနေနဲ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ ဒီနှစ်ရဲ့ ၅ လပိုင်းကနေ Asakusa မှာ 「寿司令和」Sushi Reiwa ဆိုတဲ့ဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးလှရွှေ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတာက ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံက စစ်အစိုးရကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေဖြစ်ပွားရာ လူတိုင်းက ကျောင်းပြီးတာတောင်မှ အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မျှော်လင့်ချက်ထားပြီး လုပ်ဆောင်လာတဲ့အခါ ဆူရှီဆိုင်မှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားဆိုပေမယ့်လည်း ဆရာဆီကနေ ပြင်းထန်တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ဆူရှီစားဖိုမှူးအနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းရှိကြာစွာကျော်ဖြတ်ပြီး ဆူရှီတွေလုပ်လာခဲ့တာတောင် လာစားတဲ့ဧည့်သည်တွေက
နိုင်ငံခြားသားက ဘာလို့လုပ်နေတာလဲ ?
ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ၂၄ နှစ်တောင်မှ အရသာရှိတဲ့ဆူရှီတွေကို ပြုလုပ်ထားတာကြောင်း အရင်ဆုံးမြည်းကြည့်လိုက်ပါလို့ လာနေကျဧည့်သည်တွေက ကာကွယ်ပြီးပြောပါတယ်။
ဦးလှရွှေက မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘဲ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အရည်အသွေးမှီတဲ့ ဆူရှီဆိုင်ကို ဖွင့်ရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ?
ဦးလှရွှေက ဆူရှီစားဖိုမှူးအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ရောက်လာတဲ့သူတွေများလာတဲ့ခေတ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အလုပ်သင်တွေက ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လာရောက်နေထိုင်ကြလို့ပါ။
ဦးလှရွှေက ဂျူနီယာလေးတွေကို ဒီလိုပြောပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားဖြစ်နေရင်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ယဥ်ကျေးမှုကိုစောင့်ထိန်းနိုင်ပြီး အလေးအနက်ထားရင်းရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်
ဒီလို ဂျူနီယာလေးတွေကို ပြောပြချင်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဆူရှီဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားက ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ ခုခေတ်က တကယ်ကိုမလွယ်တဲ့ခေတ် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဆူရှီဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အရင်ဆုံးစာချုပ်မချုပ်ပေးနိုင်တာတွေလည်းများပြီး တစ်နည်းနည်းနဲ့ စဥ်းစားပေးတာတွေရှိရင်တောင်မှာ နောက်မှရောက်လာတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေရှိရင် ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့မှာ နိုင်ငံခြားသားစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ဆိုတာက အများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်အလုပ်လုပ်နေတာက ဂျပန်လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့နှိုင်းယှဥ်ပြီး 「寿司令和」Sushi Reiwa ဆိုတာက ဦးလှရွှေကရှေ့ကနေ နိုင်ငံခြားသားဆူရှီဆိုင်အနေနဲ့ လုပ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် နိုင်ငံခြားသားကလဲ ? လို့ စိတ်ဘဝင်မကျတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရှိနေတဲ့အလျောက် ငါးတွေရဲ့လတ်ဆတ်မှု နဲ့ အရည်အသွေး စတာတွေကိုဦးစားပေးပြီး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ ဦးလှရွှေ ကိုယ်တိုင်ဈေးကိုသွားပြီး ငါးတွေကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး ရွေးဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဂျပန်လူမျိုးတွေ လက်ခံလာနိုင်အောင်လို့ ဂရုတစိုက်နဲ့ စီစဥ်ပေးထားပြီး သန့်ရှင်းရေးကိုလည်း သေသေချာချာ စနစ်တကျနဲ့ စီမံထားပါတယ်။
Asakusa ယှဥ်ပြိုင်စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြည့်နက်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကိုလူတိုင်းသိကြတဲ့ အကြောင်းအရာဆိုပေမယ့် ဦးလှရွှေက
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လေ့လာခဲ့ရတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ လုပ်နိုင်တာတွေကို သေသေချာချာလုပ်မယ်ဆိုရင် ဂျပန်လူမျိုးတွေက အသိအမှတ်ပြုပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေရရှိလာနိုင်မယ်လို့ ယုံပါတယ်။
လို့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အစားအသောက်တွေကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ ဘဝမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပိုများလာတဲ့အလျောက် ဦးလှရွှေတို့က ရှေ့ဆောင်လမ်းပြနေရာမှာ ရှိကောင်းရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ဆူရှီတွေက ဘာလို့ ၂ ခု ၁ set ဖြစ်နေရတာလဲ ?
အပျော်ရိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုကြောင့် ဘဝပျက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမား
အလကားသွားရတဲ့ခရီးက အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်တဲ့ !!!!